अन्तरवार्ता Archives - बडिमालिका खबर
युक्रेनका नेपालीलाई पोल्याण्ड वा हंगेरीतर्फ लाग्न वर्लिन दूतावासको सुझाव
युक्रेनमा रहेका नेपालीहरुलाई स्लोभाकिया, पोल्याण्ड वा हंगेरीतर्फ जान वर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले अनुरोध गरेको छ । ती मुलुकहरुले युक्रेनमा फसेका विदेशी नागरिकहरुका लागि मानवीयताको आधारमा नाका (बोर्डर) खुल्ला गरेको जानकारी दिंदै दूतावासले त्यतै जान अनुरोध गरेको हो । सुरक्षित तवरले नेपाल फर्कनका लागि सम्पर्कका आएका सबै नेपालीहरुलाई युक्रेन छाडेर ती मुलुकहरुतर्फ जान दूतावासले अनुरोध गरेको हो […]
काबुल — अफगानिस्तानमा गएको २४ घण्टायता भएका हिंसामा परी कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु भएको छ । तालिबानी विद्रोही समूहले सरकारसँग वार्ता गरिरहे पनि अफगानिस्तानमा तालिबानहरुले हिंसात्मक घटनालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । शुक्रबार दिइएको जानकारी अनुसार यहाँ गएको २४ घण्टा यता भएका हिंसामा परी ती व्यक्तिको निधन भएको बताइएको हो । यहाँको संस्था रिडक्सन इन भायोलेन्स […]
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चुनावी सरगर्मीको पारो तातिरहेको छ । यहि मंसिर ११ देखि १३ गते सम्म हुने महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । विधान अनुसार महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षस्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप महासङ्घले अध्यक्षमा शेखर गोल्छा पाउँदैछ । आगामी कार्यकालको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुनेछ । जसमा हालका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद […]
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा संविधान र कानुनका जानकारसमेत हुन् रामनारायण विडारी । यथार्थ खोल्ने र तिखो टिप्पणी गर्ने विडारीसँग वर्तमान सरकारको कामकारबाही, सत्तारुढ दलभित्रको विवाद, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा गरेकाे कुराकानी । प्रस्तुत छ विडारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधा अवधि पार गरिसकेको छ । […]
उत्तर कोरियाले शुक्रबार अमेरिकाविरुद्ध आणविक हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनबाट देखिएको चुनौतीको प्रतिरोध गर्न यही विकल्पमात्रै बाँकी रहेको उसको दाबी छ । ‘अमेरिकाको आणविक चुनौतीबाट उम्कनका लागि उत्तर कोरिया सरकारले सबै संभव प्रयास अबलम्बन गरेको छ, चाहे वार्तामार्फत होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार । तर सबै प्रयास आशारहित […]
काठमाडौं- भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख नाघेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा १४ हजार ९ सय ९३ संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या ४ लाख ४० पुगेको हो। गत २४ घण्टामा ३ सय १२ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मृतकको संख्या १४ हजार ११ पुगेको छ। भारतमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित […]
एजेन्सी — कोरोना महामारीको सबैभन्दा अघि (फ्रन्टलाइन) र खतरामा यसबेला डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरु देखिएका छन् । विश्वभर कयौं डाक्टर र नर्सहरु यो महामारीबाट प्रभावित भैरहेका छन् । सयौंको ज्यान गएको छ भने हज्जारौं संक्रमित भएका छन् । यही सिलसिलामा बेलायतको एक अस्पतालबाट एउटा दुःखद खबर बाहिर आएको छ । त्यहाँ एक गर्भवती नर्सको कोरोना […]
बाजुरा– कोरोना भाइरस अहिले जताततै यसैको चर्चा छ । नहोस् पनि कसरी ? मानिसको रौंको चौडाइको नौ सय भागको एकभाग जत्रो हुने यो भाइरस अहिले ८० भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ । गत डिसेम्बरदेखि चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानबाट फैलिन सुरू भएको थियो । ठूलो मात्रामा संक्रमण फैलिएका चीन, दक्षिण कोरिया, इरान, इटालीजस्ता देशले यसलाई […]
बाजुरा — गल्ति छ भने कानुनी कार्यवाहि भोग्न तयार हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द्रबहादुर मल्लले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने योजना भएको बताएका छन् । आफुले कुनै पनि पैशाको बार्गेनिङ्ग गरेको छैन्, कसरी हुन्छ बिद्यालयको भवन राम्रो बनाउनु पर्ने सहजिकरण मात्र गरेको बडिमालिका खबर सँग टेलिफोनमा बताएका छन् । आफुले ठेक्का मिलाउनका लागि कसैलाई पनि पैशा नदिएको […]
सन् २०२१ को जनगणनाको तयारी अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत मङ्सिदेखि नै पाइलट सर्भे सुरु छ । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणना – २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन र आर्थिक मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै जनगणनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा जनगणना गरिने र त्यसका सबै तथ्याङ्कहरुलाई सरकारको नीति […]
ललितपुर। हिजोआज तपाईंहरुले ललितपुरको सडकलाई नियाल्नु भएको छ ? छैन भने एक पटक अवश्य ध्यान दिएर हेर्नुहोस् । केहि फरक दृष्यि देख्नुहुनेछ । तपाईंहरुले साघुँरो सडकको दुबैतर्फ साइकल लेन देख्नुहुनेछ । केहि दिन अघि मात्र ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल नगर बनाउने भन्दै नगरभित्र साइकल लेनको शुरुवात ग¥यो । नगरलाई साइकलमैत्री तथा पर्यावरणमैत्री बनाउने भन्दै स्थानीय सरकारले […]
काठमाडौँ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेर राजनीतिक नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारतबीच सीमा समस्या चर्किएको छ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यो समस्याको समाधान कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाटै खोजिनुपर्छ भन्नेमा पनि सबै सहमत छन् । तर के त्यो तहमा वार्ता होला त […]
महिलाभित्र देखा पर्ने दमित प्रेम र यौनलाई अक्षरमा उतार्ने लेखिका हुन् । अभिलासा (२०६३) कविता–संग्रह, अभिषेक (२०६६) उपन्यास तथा तिम्रो लोग्ने र म (२०७१) गरी ३ वटा पुस्तक बजारमा ल्याइसकेकी निरुपा पुराना कवि चितवन शिखरवासकी छोरी हुन् । कथा–संग्रह ‘तिम्रो लोग्ने र म’ बजारमा आएपछि उनी आलोचितसमेत भएकी थिइन् । प्रसिद्ध कथाकार मनु ब्राजाकीको कथा–संग्रह […]
पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा सांसद देवेन्द्रराज कँडेल भारतीय नागरिक पनि भएको खुलेको छ । भारतको उत्तरप्रदेशको गोरखपुरनिवासी उनी त्यहाँको एक कलेजको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले भारतीय नागरिककै रूपमा शपथ पनि खाएका छन् । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उत्तरप्रदेश, महाराजगन्जको ठुठीबारीस्थित राधादेवी इन्टरकलेज व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका लागि कँडेल चुनाव […]
२५ असोज : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमणले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने बताएका छन् । मन्त्री भट्टराईले वर्षेनी चिनियाँ पर्यटक वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको निम्ति महत्वपूर्ण आकर्षण बन्ने र यसले चिनियाँ पर्यटकको बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गरे । मित्रराष्ट्र […]
पछिल्लो समयकी हिट एन्ड हट हिरोइन् हुन् साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह । उनी अभिनित फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’ अहिले प्रदर्शन भइरहेको छ । गत १० गते शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको यो फिल्म दर्शकका लागि दसैँ उपहार भनेर ल्याइएको हो । ‘ड्रिम्स’बाट अभिनयमा भित्रिएकी साम्राज्ञीका अहिलेसम्म ८ फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । ‘तिमीसँग’ र ‘मारुनी’ बाहेक सबै हिट […]
अभिनेत्री स्वेता खड्काले व्यापार र सिनेमासँगै सामाजिक सेवामा पनि कदम बढाएकी छिन् । उनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्ती निर्माणकै लागि सिनेमा ‘कान्छी’को छायाकंन पछि सारेकी छिन् । स्वेता खड्का अहिले धेरैको लागि रोल मोडल बनेकी छिन् । तर उनको जीवनको यहाँसम्मको यात्रा त्यति सहज थिएन । पनौतीमा जन्मेर अहिले स्वेता खड्काका नामले स्थापित हुँदासम्म जीवनमा घटेका […]
दीनदुःखीको उपचार गर्न तलबभत्ता खर्चिने पत्रकार
२०६६ को एउटा अनिदो बिहान । पश्चिमोत्तर सुदूरको पाहाडमा घामले राम्ररी पखेँटा फिँजाइसकेको थिएन । बासिविदो बसेजस्तो आकाशमा टम्म बादल बास बसेको थियो । एकजना दीनहीन बालिका, आफूजस्तै दुब्लो, भोक, रोगग्रस्त र शोकमग्न अनुहारको बालक पिठ्युँमा बोकेर घाम नझुल्कँदै प्रकाश सिंहको औषधि पसलमा आइन् । अहेव सिंह बाजुराको देवलसिङ स्वास्थ्यचौकीमा काम गर्थे । रोगले गाँजेका […]
नेपालमा दिन दिनै विभिन्न खालका घटनाहरु घट्ने क्रम बढ्दो छ । एउटा घटना सेलाउन नपाउदै हामीले अर्को डर लाग्दो घटना सुन्ने गरेको छ । यसै बिचमा काभ्रे जिल्लाको बनेपा वडा – ६ मा एउटा डर लाग्दो घटना घटेको छ । पानी ट्यांकी भित्र १६ महिने बालकको शब फेला परे संगै घटना शंकास्पत भएको छ । […]